AKHRISO: Qodobbada Kasoo Baxay Kulankii Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed La Yeeshay Madaxweyneyaasha DDS Iyo Canfarta - Jigjiga Online
HomeSomalidaAKHRISO: Qodobbada Kasoo Baxay Kulankii Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed La Yeeshay Madaxweyneyaasha DDS Iyo Canfarta
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Ra’iisal wasaaraha dalkan Itoobiya, Dr. Abiy Ahmed ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay madaxwenaha Dawladda Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar iyo madaxweynaha Canfarta.
Kulankan oo ay ka qayb-galeen madaxda Sirdoonka iyo Ciidamada Itoobiya ayaa waxa lagu canaantay Madaxweynaha Canfarta, waxaana loo sheegay in maamulkiisu uu gef ka galay qarannimada dalka, kaddib markii ay sheegeen in argagixiso iyo dad shisheeye ah ay dalka soo galeen.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar ayaa intii uu kulanku socday, waxa uu Ra’iisal wasaaraha u sheegay dhibaatada ay Canfartu ku hayaan shacabka Gobolka Sitti iyo dhacdadii ugu dambaysay ee maamulkaasi uu argagixisada ku tilmaamay dadka deegaamadaas ee is-difaacaya.
Ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska Ra’iisal wasaaraha oo weli warbaahinta soo gaadhay, hase yeeshee ilo xogogaal ah ayaa u xaqiijiyey in dhawr qodob la isla qaatay, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
In mar kasta tixgelinta la siiyo rabitaanka shacabka ku nool deegaamadaas.
In lagaa fogeeyo aaggaas dadka hubaysan
In ay khalad weyn oo qarannimada Itoobiya meel ka dhac ku ah ay ku kaceen maamulka xukuumadda Canfarta markii ay warar been abuur ah oo khaayinimo qaran ah ku baahiyeen saxaafadda iyagoon ogolaansho ka haysanin dawladda federaalka.
In la joojiyo deegaamaynta cusub ee ay maamullada qaar dabada ka riixayaan.
In tallaabo ku habboon laga qaado saxaafaddii baahisay wararka been abuurka ah.
In ciidamada milaterigu ay ilaaliyaan amniga iyo nabad-qabka shacabka iyo xoolahoodaba.
In Canfartu ay soo celiso xoolaha ay shacabka Soomaalida ka dhacday.